कसरी बनाउने नानीबाबुलाई प्रतिभावान? जान्नुहोस् ५ टिप्स - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी बनाउने नानीबाबुलाई प्रतिभावान? जान्नुहोस् ५ टिप्स
काठमाडौं, चैत ४ । प्रायजसो सबै अभिभावक आफ्ना नानीबाबुहरुको भविष्यबारे चिन्तित हुन्छन्। आफ्ना नानीबाबुहरुलाई सही बाटो देखाउन उनीहरु हर प्रयासमा तल्लिन हुन्छन्।
नानीबाबुहरुलाई पढाइमा सबल बनाउन वा चनाखो बनाउन अनावश्य दबाब दिनेगर्छन्। तर यसो गर्नु राम्रो होइन। इच्छाविरुद्ध दबाब दिँदा उनीहरुमा पढाइप्रति अरुचि बढेर आउँछ।
उनीहरुलाई चनाखो वा जिम्मेवारी बनाउन सानै उमेरदेखि कोशिश गर्नुपर्छ। किनकी सानो उमेरका नानीबाबुहरुको दिमाग छिटो विकसित हुन्छ। सम्झाएको छिटो बुझ्ने गर्छन्।
अभिभावकले नानीबाबुहरुसँग बस्दा होस् वा कुरा गर्दा उनीहरुजस्तै बनिदिनुपर्छ। उनीहरुसँग रमाउने, उनीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ झर्को नमानी बताइ दिनुपर्छ। यसो गर्दा छिटो बुझ्ने र आमाबाबुप्रति सकारात्मक हुन्छन्। र कामप्रति जिम्मेवार बन्ने बानीको विकास हुँदै जान्छ। तल पाँच टिप्स दिइएका छन् जुन तपाईका नानीबाबुहरुलाई प्रतिभावान बनाउनमा केही सहयोग पुग्नेछ।
१‍- नानीबाबुहरुसँग नियमित कुराकानी गर्नुहोस् : नानीबाबुहरुलाई प्रतिभावान बनाउनमा कुराकानीले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। नियमित कुराकानीले नानीबाबुहरुसँग नजिक बनाउनुका साथै नानीबाबुहरुमा आत्मविश्वास बढ्छ। नानीबाबुहरु बोल्न थालेदेखि उनीहरुसँग रमाइला कुराकानी गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। उनीहरुसँग अंग्रेजी हिन्दी,नेपालीलगायत भाषामा कुराकानी गर्नेहोस्। ताकी उनीहरु बढ्दै गएपछि कुनै पनि भाषाको समस्या नआ‍ओस्।
२- घरमा खुशियाली वातावरण बनाउनुहोस : घरमा नानीबाबुहरुलाई राम्रो वातावरणा दिनुपर्छ। सुन्दर वातावरणमा हुर्केका नानीबाबुहरु पछि गएर एक जिम्मेवार मात्र नभइ बुद्धिमानी हुन्छन्। नानीबाबुहरुलाई सानैदेखि जिम्मेवारी बन्न दिनुपर्छ। अभिभावकले नियमित उनीहरुसँग खेल्ने, रमाउने गर्नुपर्छ।उनीहरुमा परेको समस्या बुझ्ने कोशिस गर्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरुमा कामप्रति जिम्मेवारी हुन्छन्।
३- नानीबाबुहरुको उमेरअनुसार खेलौना किन्नुहोस- : नानीबाबुहरुका खेलौना किन्दा उनीहरुको उमेरमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। किनकी उमेर अनुसारका खेलौना भएनन् भने यसले नानीबाबुहरुको मानसिक विकासमा असर गर्छ। खेलौनाले बच्चालाई खुसी र दु:खी बनाउने भएकाले उमेरअनुसारका खेलौना दिनुहोस्।यस्तो खेलौना दिनुहोस्, जसले बच्चालाई ज्ञानसम्बन्धि जानकारी देओस्।
कापी किताबका साथसाथै उनीहरुलाई अंग्रजी/नेपाली वर्णमाला पढ्न लगाउने,‍औंला भाँचेर गन्ती गर्न सिकाउने,फलफूल दिँदा सम्बन्धित फलफूलको नाम बताइ दिने, चराचुरुंगी देखाउँदा नाम भनिदिने, घरमा आएका पाहुनाको नाम/नाता बताइने दिने, घुम्न जाँदा जाँदै गरेको स्थानको नाम र पुगिसकेपछि पुगेको स्थानको नाम बताइदिनुपर्छ। यसो गर्दा नानीबाबुहरुले सबै कुराको जानकारी पाउनुका साथै नयाँ-नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउँछन्।
५- नकारात्मक सन्देश दिने उपहार नदिनुहोस्: नानीबाबुहरुको जन्मदिनमा हतियार बुझाउने खालका खेलौना भुलेर पनि दिनुहुँदैन। यसले नानीबाबुहरुमा क्रोधको भावना पैदा गर्छ। हतियार बुझाउने खेलौनामा रमाउने बालबालिकापछि गएर रिसाहाखालका हुनेगर्छ। यस्ता नानीहरुमा सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक सोचाइ बढ्नेगर्छ।
नानीबाबुहरुमा नकारात्मक सोचको विकास हुनेगर्छ। त्यसैले बालबालिकालाई उपहार दिँदा उमेरमा ध्यान दिनुपर्छ। भर्खर स्कुल जान थालेका नानीबाबुहरुलाई ठूला अक्षर भएका किताब,कलम,पेन्सिल,इरेजर,कटर,झोला,कुनै पर्यटकीयस्थल बुझाउने फोटो, कुनै विशेष जनावरको फोटो आदि उपहारको रुपमा दिँदा राम्रो हुन्छ। सम्बन्धित नानीबाबुहरुको फोटो फ्रेममा राखेर उपहारका रुपमा दिँदा उनीहरु धेरै खुसी हुन्छन्। यो सामग्री अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: Child Read